मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम अन्सारी कुनै हालतमा पछाडि नहट्ने ! - Nepal Insider
Home/समाचार/मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम अन्सारी कुनै हालतमा पछाडि नहट्ने !
मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम अन्सारी कुनै हालतमा पछाडि नहट्ने !
अन्सारीको नागरिकतामा फरक फरक जन्ममिति हुनुका साथै शैक्षिक प्रमाणपत्र भारतीय भेटिएको थियो ।
मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम अन्सारीलाई सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष पदबाट स्वेच्छाले पछि हट्नु सुझाव दिएको थियो तर मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम अन्सारीले स्वेच्छिक रुपमा पछि नहट्ने बताएका छन् ।
बैठकमा नेकसा सांसद भट्टराईले अन्सारीलाई नागरिकतामा फरक फरक जन्ममिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाम उल्लेख नहुनुको कारण सोधेको थियो। समिम अन्सारीले नागरिकतामा आफ्नो कारण नभई अरुका कारण प्रश्न उठेको भन्दै छानबिन गर्न चुनौती दिएक छन्।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु योगेश भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डेले भोलि कानुनी समस्या आउने भन्दै स्वेच्छिक रुपमा पछि हट्न सुझाएका थिए । तर, अन्सारीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
उनले भने, “म कुनै हालतमा ब्याक हुन्न । मैले कुनै त्रुटि गरेको छैन ।”
उनले आयोगको अध्यषमा सिफारिस हुनु दुई दिन अघि नै आफूले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएको तर, पार्टीले निर्णय गर्न ढिला गरेको बताएका छन् । ६ माघमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष सिफारिस हुँदासम्म उनी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिकको बन्दसूचीमा थिए ।
नेपाल छोड्ने बेलामा सुर्यले टिका सँग गायको यो दोहोरी हेरे पछि हजुरहरुको पनि आँखा रसाउछन – भिडियो सहित
कोमल वली सिकिस्त बिरामी अस्पताल भर्ना, यस्तो छ पछिल्लो अबस्था